Massimiliano Allegri Oo Faah Faahin Ka Bixiyay Qaabkii Uu Florentino Perez Ugu Soo Bandhigay Shaqada Tababaranimo Ee Real Madrid Iyo Sababtii Uu Iskaga Diiday. – Laacib.net
Tababaraha kooxda Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa ka mid ahaa tababarayaashii sida xoogan loola xidhiidhinayay shaqada kooxda Real Madrid ee uu Zinedine Zidane iska casilay kadib finalkii Champions League, laakiin Allegri ayaa markii ugu horaysay ka hadlay qaabkii uu Florentino Perez ula soo xidhiidhay iyo sababta uu shaqada tababaranimo ee Real Madrid uu ku diiday.
Massimiliano Allegri ayaa muujiyay sida uu daacad ugu yahay kooxdiisa Juventus isla markaana uu u ixtiraamayo hadal uu isla intii aanu Perez xidhiidhka la soo samayn u sheegay maamulka Juventus kaas oo ah in uu ku war galiyay in uu kooxda sii joogayo, wuxuuna qiray in sababtan awgeed uu Perez ugu sheegay in uu Juvnetus sii joogayo.
Massimiliano Allegri ayaa cadeeyay in madax waynaha Real Madrid ee Florentino Perez uu telefoonka ka soo wacay balse waxa uu xusay in hadalka uu maamulka kooxdiisa ugu sii sheegay in aanu baxayn ay sabab u noqday in uu Perez uga mahad celiyay xidhiidhkiisa balse aanu bixi karin.
Massimiliano Allegri oo xidhiidhkii uu Perez la sameeyay ka hadlaya ayaa yidhi: “Madax waynaha Real Madrid ee Florentino Perez ayaa aniga i soo wacay, hal mar ayaan isaga la hadlay. Waxaan u sheegay in aan kalmadayda siiyay Juventus taas oo ah in aan joogayay halkan isla markaana waxaan doonayay in aan ixtiraamo wixii aan sheegay”.
Laakiin Massimiliano Allegri ayaa sheegay in uu Florentino Perez uga mahad celinayo in uu isaga ka fikiray oo uu xidhiidh la soo sameeyay wuxuuna dhinaca kale Allegri sheegay in kooxda uu haysto ee Juventus ay ka mid tahay kooxaha ugu xoogan aduunka isla markaana ay wax iska badali karaan xaaladii ay ku soo jirtay.
Massimiliano Allegri oo ka hadlaya kooxdiisa Juventus ayaa yidhi: “Kooxda hadda ee Juventus waa mid ka mid ah kuwa ugu xoogan aduunka, waxaa waajib nagu ah in aanu horumarin ku samayno wixii aanu afar sano ka hor bilawnay, waxaana aniga waajib iagu ah in aan taas ku sameeyo kooxdan ciyaratoyda ah”.
Massimiliano Allegri oo si wayn loola xidhiidhinayay kooxda Real Madrid ayaa muujiyay in hadalkii uu maamulka kooxdiisa ugu sheegay in aanu baxayn uu sababta dhabta ah u noqday in uu Real Madrid iska diiday waana war ay xili maalin hore qoreen wargayska Spain balse hadda xaqiiqdiisa uu Allegri shaaciyay.